Ababonisi, Osonkontileka kanye nabasebenzi: Silibangise kuphi? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 6, i-2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Imvamisa, ngizwa ukukhala kobuhlungu lapho sibheka kubaluleki bangaphandle noma osonkontileka ukuze umsebenzi uqedwe. Isimo esibucayi - kwesinye isikhathi abasebenzi bazizwa sengathi bakhashelwa ukuthi uya ngaphandle. Ngokwethembeka impela, kukhona ijika lokufunda nezindleko ezingeziwe zokuya ngaphandle. Kunezinzuzo, noma kunjalo.
Ngiyalithanda leli qweqwe kusuka Zosizi:
Ukuhlekisa eceleni, abaxhumanisi nosonkontileka bayalibona iqiniso lokuthi uma bengenzi kahle, ngeke babuye. Isikhathi. Kuyithuba elilodwa lokufaka ukuzethemba kuklayenti ukuze uthole umsebenzi owengeziwe. Futhi, azikho ezinye izindaba ezihlotshaniswa nabasebenzi - iholide, izinzuzo, izibuyekezo, ukululeka, izindleko zokuqeqesha, ezepolitiki, njll.
Abasebenzi abatshala imali isikhathi eside. Lokhu kungazwakala kungewona umuntu, kepha kufana nokuthenga indlu noma ukuqasha ifulethi. Indlu idinga ukunakekelwa okungaphezulu okuzoba nethemba lokuthi kuzokhokha ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ingabe kuyakhokha ngempela? Uma unenzuzo lapho abantu bengahlali khona ngaphezu kweminyaka embalwa, ingabe uthola imbuyiselo yakho ekutshalweni kwemali?
Ababonisi nosonkontileka nabo banomqondo obukhali wokuhlinzekwa kwamakhasimende. Uyikhasimende labo futhi inhloso yabo ukujabulisa wena. Kwesinye isikhathi lokhu akunjalo ngabasebenzi. Abasebenzi balindele abaqashi babo - kwesinye isikhathi banamandla kunalokho okuphambene nalokho.
Njengoba izinzuzo zokunakekelwa kwezempilo zikhuphuka nemali engenayo yabasebenzi iqhubeka nokuba yinkinga, kuyangimangaza ukuthi asisebenzisi osonkontileka nababonisi ngokwengeziwe ukwenza umsebenzi wethu. Kuyadabukisa lokhu ngandlela thile, kepha impela kwehlukanisa ukolweni kumakhoba. Ngicabanga ukuthi kuthatha inhlangano enamandla ngendlela eyisimanga ukwakha isisekelo sabasebenzi abahle ngendlela yokuthi awudingi ukubheka ikhono langaphandle - futhi ukhokha ngokwanele ukuze ungalokothi ukhathazeke ngokushiya kwabo. Ingabe ikhona inkampani enjalo?
Imfihlakalo ye-Google PageRank Solved
Ngo-Apr 6, i-2007 ku-9: 50 AM
Ngeshwa uDoug, azikho izinkampani eziningi kakhulu ezikhona ezifana nokuthi, okungenani angazi ngazo. Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi inkampani idinga ukuxuba izinto kancane futhi ithole usizo lwangaphandle, abasebenzi kwesinye isikhathi bangavumela ezinye izindaba eziningi zingene endleleni yokusebenza kwabo njengokukhokha, ukuthuthukiswa kwemisebenzi, kanye nokunakekelwa kwezeMpilo ukusho okumbalwa. Njengoba ushilo kwesinye isikhathi utshalomali lwesikhathi eside alukhokhi.
Ngo-Apr 6, i-2007 ku-12: i-35 PM
Okuvame ukwehlulwa yizinkampani ukubona ukuthi zinikezela ngamaphrojekthi amasha futhi ajabulisayo kubacebisi ngenkathi zinamathisela abasebenzi bazo njengamanje nomsebenzi wokulungisa. Lokhu kuphikisana nomqondo wokuthi abasebenzi bayizimali zesikhathi eside. Ingxenye yalokho engikuthandile ngokuba ngumxhumanisi ukuthi bekunamathuba amahle kakhulu wokuthi yonke iphrojekthi izongivezela izinto ezintsha.
Ngokuqondene nababonisi abanqanyuliwe uma bengasebenzi, lokho akuvamile ukwenzeka ngokushesha okwanele. Ngakho-ke bagcina bengenzanga lutho futhi ngenkathi behola. Lokhu kuzala intukuthelo phakathi kwabasebenzi.
Ngo-Apr 6, i-2007 ku-12: i-32 PM
Ngokombono womsebenzi, ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kufanele ubheke ngale kwezinombolo ukuthi yini egcina isisebenzi siseduze.
Eminyakeni embalwa eyedlule ngangisebenza njengonkontileka ozimele wenkampani yabeluleki bezepolitiki. Ngazithengela owami umshuwalense wezempilo futhi ngangingenalo uhlelo lokuthatha umhlalaphansi. Ngangibheka lo msebenzi 'njengonyawo emnyango' wami kwezepolitiki. Akusebenzanga kanjalo. Kodwa angizisoli. Eqinisweni, ngangikuthanda ukusebenza lapho. Umphathi wami ubengithemba, engabheki ehlombe lami. Ngokomthetho akakwazanga ukunquma ukuthi ngisebenze ngamahora amangaki (waphinde futhi kwezombusazwe usebenza 24/7).
Manje ngisebenza njengesisebenzi se-SEM ejensi. Ngenqabe umshwalense wezempilo b / c owomyeni wami ubungcono futhi inkampani iyisiqalo ngakho-ke akunanzuzo. Umholo wami ungaphansi kuka-5k kunalokho engikwenze eminyakeni embalwa edlule. Kepha uyazi ini? Ngiyawuthanda umsebenzi. Engisebenza nabo bahle futhi kunomdlalo omncane kakhulu. Sinesikhathi esiguqukayo esimangazayo sokukhulisa izingane sihlanya isikole nakho konke.
Ngeke ngiphike ukuthi imali iQINILE. Kepha umcabango wokubuyela endaweni yendabuko yomsebenzi - kahle, angikwazi nokukuqonda - nganoma yisiphi isamba semali. B / c ngijabule. Futhi awukwazi nje ukubhala lokho kukhokhelwe.
Ngo-Apr 6, i-2007 ku-2: i-47 PM
Abanye abantu bacabanga ukuthi uma kuthatha owesifazane oyedwa izinyanga eziyi-9 ukuthi abe nengane, bangaqasha abanye abeluleki besifazane abayisishiyagalombili futhi ngandlela thile bakhiqize ingane ngenyanga eyodwa.
Kwesinye isikhathi, akusebenzi nje njengoba kulindelwe.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-9: 36 AM
Njengomxhumanisi, ngicabanga ukuthi kuhle. Yebo, ayizinzile kangako, kepha ivumela inkululeko eyengeziwe, futhi ngithola ukukhetha umphathi wami. Kufanele ngithenge izinzuzo zami (ezingakubi kangako - ngiseCanada kepha ngiyaqonda ukuthi kuyabiza kakhulu kwezinye izindawo).
Ngicabanga nokuthi kuya ngendima. Ngingumxhumanisi wewebhusayithi. Iningi labantu lidinga ukwakhiwa kabusha njalo eminyakeni embalwa bese lithola i-jr. izinsiza zokugcina. Ngakho kuyasebenza. Ezinye izindima zidinga isikhathi esigcwele. Ngicabanga umeluleki wami wezezimali - angifuni ukuthi abe ngusonkontileka noma umnyango ojikelezayo wabafana abehlukene. Ezinye izindima zidinga lokho kuzinza.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-10: 08 AM
Ngivumelana nokwenziwa jikelele kokuthi ezimweni eziningi, umxhumanisi uzoqhutshwa kakhulu futhi anikeze ngezinsizakalo ezingcono zamakhasimende kunabasebenzi bangaphakathi. Abasebenzi abasebenza kancane bavame ukuba ngaleyo ndlela ngoba abawenzi umsebenzi abawuthandayo futhi abawenza kangcono, kabaklonyeliswa uma benza noma bangahlawuliswa uma bengenzi kahle. (Impela, kunezizathu ezengeziwe eziyisigidi, kepha ngifaka lapha).
Kepha ubudlelwano bokubonisana bungafakwa kulezo zinhlaka futhi. Ngicabanga ukuthi okuhle ukuthi ngokuzenzakalela, uqasha umxhumanisi ukuthi enze okuthile okuthile okungenzeka ukuthi uyakwazi futhi uthanda ukukwenza. Futhi kunomvuzo / isijeziso esiqondile somsebenzi owenziwe… ayikho indlela ozokhipha ngayo idokodo lesisebenzi somkhiqizo othunyelwe sekwedlule isikhathi. Futhi abasebenzi ngokuvamile bayazi ukuthi banomsebenzi noma ngabe yini… uma umkhiqizo uthumela ngesikhathi bangalindela ukukhushulwa okungu-4%, kanti umxhumanisi ubheke phambili emsebenzini owengeziwe phansi komgwaqo noma inkontileka enhle yesondlo.
Kunabaluleki abaningi abangalungile laphaya, futhi amathumbu ami ezwa ukuthi kunzima ukuthola umxhumanisi omkhulu njengoba ukuthola isisebenzi esikhulu. Ngicabanga ukuthi uma uthola eyodwa enkulu yazo, uya nayo. Futhi uma unamathele kokubi kwalokhu, kufanele uqhubeke.
Iposi elihle uDoug… kuningi ongacabanga ngakho, nokuthile okusengqondweni yami kakhulu ngoba amaklayenti ami amaningi asesimweni lapho azama ukuthola ukuthi angiqasha yini njengomxhumanisi noma aqashe omunye umuntu njengesisebenzi.
Ngo-Apr 11, i-2007 ku-9: 17 AM
Okuthunyelwe okuthakazelisa kakhulu. Njengomsizi we-Virtual, ngiyinkontileka ethe xaxa ngengcosana nje yomxhumanisi. Into eyodwa esiphatha kabi ukucabanga kwabaqashi abafuna isisebenzi, kepha bafuna ukubakhokhela njengosonkontileka ukuze bagweme intela. Uxolo, kepha awutholi ikhekhe lakho futhi ulidle, nawe. Njengomnikazi webhizinisi, angisona isisebenzi. Uma iklayenti lifuna ukuthi ngenze njengami (ngamukele ama-oda akhonkothwe, ngibe khona lapho ngibiza khona, ngifonele amakinati), khona-ke bazodingeka bangikhokhele njengesisebenzi, okusho ukuthi kufanele sikufanele ngenkathi, isikhathi, ukukhokha, izinzuzo ezihluzekile nezindleko (yebo, abasebenzi bakhokhelwa okokusebenza kwabo futhi babuyiselwa izindleko). Uma bengafuni ukwenza lokho, lapho-ke kufanele baqale ukwamukela iqiniso lokuthi osonkontileka abayona indlela yokugwema ukulandela umthetho, nokuthi kuzoba khona ukuhweba okunjengokuthi njengabaninimabhizinisi, osonkontileka bazokhokhisa amanani akhokhelwayo akhombisa ikhono labo, ulwazi kanye nenani lawo, futhi lokho kuzoxhasa ibhizinisi labo ngokunenzuzo.